Ny votoatin'ny SEO dia mety ho mpamorona rohy angaha?
Ny singa manan-danja ao amin'ny fanentanana ara-barotra an-tserasera dia mahasarika ny mombamomba ny SEO sy ny kalitao SEO amin'ny loharanom-baovao azo antoka. Mety ho sarotra ho an'ny tranokalam-baovao vao haingana izany mba hahazoana rohy avy amin'ny tranokalan'ny PR na famoronana fifandraisana amin'ireo bilaogera malaza. Na izany aza, tsy antony mahatonga ny fahakiviana izany. Na ny mpivarotra sasany efa za-draharaha aza dia manana olana amin'ny fahazoana bakoka tsara. Izany no antony namoronana ireo generatera mpanamboatra bakalorea mba hanatsotra ny dingan'ny fahazoana fifandraisana tsara.
Tsy misy dikany ny paikady SEO raha toa ka tsy mandeha tsara ny votoatin'ny Internet. Maherin'ny 80% amin'ny fahombiazan'ny tetikasan'ny SEO dia miankina amin'ny votoaty avoakanao, izany no antony maha-manan-danja ny mijery manokana ny lanjanao sy ny asany.
Noho izany, raha ny lohateninao no loham-pifandraisana mivadika, ity lahatsoratra ity dia mahasoa ho anao. Andeha hodinihintsika ny teknikam-pahaizana votoaty sasany izay hanampy ny fanentanana fananganana rohy.
Mamorona votoaty mahafinaritra, manome ny mpamaky anao amin'ny zava-baovao
Ny antony Ny tsy firaikan'ny mpampiasa amin'ny votoatinao dia azo hazavaina amin'ny hafetsena fa tsy ny maha-tokana ny lahatsoratrao. Rehefa manao fikarohana ara-tsakafo ianao, dia mety mamaky ireo lahatsoratra mifaninana aminao ianao izay mamoaka lahatsoratra maro sy lahatsoratra. Na dia izany aza dia tsy hoe hevitra tsara fotsiny ny manoratra amin'ny lohahevitra iray ihany fa ho lasa mpamadika rindrambaiko satria ny tranonkala hafa dia azo antoka fa nanao toy izany ary ny lohahevitra manokana dia efa nahatratra ny fetrany. Izany no mahatonga ahy manoro hevitra mafy anao tsy hanoratra amin'ny lohahevitra mitovy amin'izay ataon'ireo mpifaninana aminao. Raha tokony ho izany, dia manomboka hevitra vaovao sy mandroso vaovao izay mety hahitana zava-baovao ho an'ny mpamaky anao. Ankoatr'izay, mila manalavitra ny fampiroboroboana ny tenanao ianao raha toa ka tsy mahazatra izy ary tsy manentana ny tombotsoan'ny mpampiasa amin'ny marikao.
Amin'izao fotoana izao, ny fikambanana Google dia miankina amin'ny kalitaon'ny backlinks fa tsy ny habetsahany. Izany no antony tokony hikaroka rohy fananganana rohy avy amin'ny loharanom-baovaom-panjakana ambony. Ny fikarohana ireo tranonkala manam-pahefana ambony indrindra izay tianao hampiroboroboana ny votoatin'ny banky dia mety hanome hevitra vaovao bebe kokoa momba ny votoatiny mifanentana.
Mitodiha any amin'ny mpihaino anao
Mba hampiasanao ny votoatin'ny fitaovam-pivoarana, mila mampifaly ny mpihaino anao ianao. Raha manoratra ny votoatin'ny mpampiasa ianao ao an-tsaina, dia manome azy amin'ny loharanom-baovao hafa izay manintona ny mpihaino marim-pototra mitovy aminao.
Mba hahafantarana raha mitaraina amin'ny mpihaino anao ny votoatinao na tsia, dia mila manao fanadihadiana momba ny varotra ianao ary mitady ny mety hilain'ny mpanjifa anao. Azonao atao koa ny mamerina mamerina indray ny hevitry ny mpampiasa amin'ny alalan'ny fanoratana lahatsoratra mifototra amin'ireo teny fikarohana vaovao kokoa satria ny mpamaky amin'izao fotoana izao dia mety hanontany tena. Ataovy azo antoka fa mamaly ireo fanontaniana mety manasongadina ny teny fototra tsirairay ianao mba hijanona ho manan-danja.
Hanatsara ny tsipìkanao
Mba hanatsarana ny toerana misy anao eo amin'ny sehatry ny tranonkala, azonao atao ny mamolavola ny sombin-tsoratra SERP anao kokoa sy ny tenanao manokana. Ny fametrahana tsipiky SERP dia mety hampitombo ny isan'ny tsindry ary hamindra ny pejinao amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Na dia mety tsy hisy fiantraikany mivantana eo amin'ny toerana misy anao ao amin'ny tranokalan'ny SERP aza ny sombin-tsoratra tsara ho tsara, dia ho toy ny fanehoana tsara ny votoatinao amin'ny botsaka sy ny mpampiasa azy ireo Source .